दीपकराज गिरीपछि दीपाश्रीको स्पष्टीकरणः ‘ब्याउने’ हैन, ब्या हुने ! - SabKura News
Home मनोरञ्जन दीपकराज गिरीपछि दीपाश्रीको स्पष्टीकरणः ‘ब्याउने’ हैन, ब्या हुने !
दीपकराज गिरीपछि दीपाश्रीको स्पष्टीकरणः ‘ब्याउने’ हैन, ब्या हुने !
काठमाडौं – चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को प्रचारात्मक गीत ‘बिच बिचमा’ विवादमा तानिएको छ । त्यसो त फिल्म चलाउन फण्डा गर्ने क्रममा हरेक वर्ष दीपक–दीपा विवादमा तानिने गर्छन् । एक हिसाबले दीपक–दीपाले यस्तै फण्डा गरेरै भए पनि विवादसँगै फिल्मको प्रचार गर्छन् ।
गीत विवादमा आएपछि दीपकराज गिरीले यो गीतमा ब्याउने नभनेर बिहे हुने भन्न खोजिएको बताएका थिए । यता दीपाश्री निरौलाले पनि सोही कुरा दोहोराएकी छिन् । उनले त अझ पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा यसले आफूहरुलाई नै फाइदा गरेको बताएकी छिन् ।
‘वास्तवमा यो बिहे हुने कुरा हो, स्ल्याङ अर्थमा ब्याउने भन्न खोजिएको हो,’ दीपाको भनाइ छ, ‘यसलाई फण्डाका रुपमा लिनुपर्छ, भिडियो हेर्दा पनि झगडा परेजस्तो छ, प्रमोसनसँगै छोटो समयमा होस् भनेरै यस्तो गीत बनाएका हौँ ।,’
दीपाश्रीले प्रमोसनल भिडियो बनाउने क्रममा यस्तो भिडियो बनाइएको बताएकी छिन् । आफैलाई ब्याउने बनाएर दीपाश्री निरौलाले कस्तो प्रचार गरेकी हुन् भन्दै दर्शकले भने मजाक बनाएका हुन् ।
Previous articleघुस लिएको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ
Next articleयौन स्वास्थ्य सम्बन्धी जान्नैपर्ने १६ कुराहरु
नेपाल अवतरण गर्ने जहाजमा नेपालको परिचयात्मक अडियो सन्देश बजाइने
बगैंचाभरि फूल फुल्छ मनभरि पीडा
करेन्ट लागेर १७ वर्षीय युवकको मृत्यु
डुबेर तीनको मृत्यु
रामचन्द्र र वर्षाको दशैं-तिहार गीत ‘झल्को सानुकै’ सार्वजनिक [भिडियो]
पर्वतारोहीलाई श्रीमती पाउन गाह्रो
दशैं मान्न उपत्यकाबाट १० लाख बाहिरिए
धुलिखेल र धरान उपमहानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्धमा सम्झौता